Chocolate ka madow oo lagu daro saliid saytuunka waxa uu ka hortagaa cudurada wadnaha - Horn Future
Chocolate ka madow oo lagu daro saliid saytuunka waxa uu ka hortagaa cudurada wadnaha
Horn Future-Daraasad cusub oo Italian ah ayaa muujisay in cunitaanka (chocolate) ka madow ee ay ku jirto saliid saytuunka nuuca (extra virgin olive oil) uu yareeyo halista cudurrada wadnaha iyo xiddidada dhiig-mareenada.
Cilmi-baadhayaal katirsan jaamacadda (University of Pisa) ee Italy kutaala ayaa sameeyay daraasaddan kuwaas oo kaga dhawaaqay natiijakeeda Salaasadii shirka sanadlaha ah ee Ururka Caafimaadka Yurub ee Caafimaadka Wadnaha oo ka dhacay magaaladda Barcelona ee dalka ​​Spain.
Daraasadan ayaa waxa qayb ka ahaa 26 mutadawiciin ah oo 14 ay yihiin rag iyo 12 haween ah kuwaas oo lahaa waxyaabo kor u qaadaya halista cuduradda wadnaha sida sigaarka, baruurta (cholesterol) ka ee sareeysa iyo jiritaanka cudur taariikheed.
Cilmi-baadhayaasha ayaa waxa ay ka qaybgalayaashan siiyeen 40 gram oo (chocolate) ah oo madow oo ay ku jirto saliid saytuun nuuca (extra virgin olive oil) maalin kasta muddo 28 maalmood ah.
Dadkan ayaa waxa laga qaaday dhiigga iyo kaadida oo baadhitaan lagu sameeyay si loo oggaado loona qiimeeyo isbadilka adkaanshaha xiddidada dhiig-mareenada iyo qiyaasaha cadaadiska dhiigga, iyada oo kormeer lagu hayo xaaladda sigaar-cabka iyo tilmaamaha qiyaasaha qarada jidhka ee ka qaybgalayaasha.
Cilmi baadhayaashan ayaa waxay ogaadeen in (chocolate) ka madow ee lagu laaqay/ qasay saliid saytuunka ay yareeysay heerarka (atherosclerosis) oo ah cudurka keena adkaanshaha xiddidada dhiig-mareenada iyo heerarka cadaadiska dhiigga ee bukaanada marka loo eego xaaladdooda ka hor tijaabadan.
Dr. Rocella di Stefano oo ah dhakhtarad ku takhasustay wadnaha iyo xiddida dhiig-mareenada ee katirsan jaamacaddan ayaa u celisay sababaha hoos u dhaca halista cudurada wadnaha inay yihiin marka la cuno (chocolate) ka madow oo ay ku jiraan heerar sare oo ah baruurta loo yaqaano (lipoprotein) iyo maadada ( polyphenols) ee dabiiciga ah.
Dhakhtardan ayaa waxay intaa ku dartay in raacitaanka nidaam cunto oo caafimaad leh oo ay ku jirto (antioxidants) sida maadada ( polyphenols) ee laga helo khudradda, midhaha, cocoa ga, saytuunka iyo tufaax casaanka ah ay kaa ilaaliyaan cudurrada wadnaha.
« North Korea says missile over Japan was ‘first step’	» Xujaajta oo ku qulquleysa Mina si ay iskugu diyaariyaan tiirka ugu weyn Xajka ee Carafa